ObekwiTeam of Choice uchaza ngokujoyina iTS Galaxy - Impempe
ObekwiTeam of Choice uchaza ngokujoyina iTS Galaxy
UPogiso Sanoka osanda kusayina kwiTS Galaxy esuka kwiMaritzburg United
UPogiso Sanoka, osanda kusayina kwiTS Galaxy, uthi akubanga yisinqumo esilula ukushiya iMaritzburg United abesehlale kuyona amasizini amaningi.
Lesi sitobha siyasayine inkontileka yeminyaka emibili neGalaxy, saqeda ukuqagela mayelana nekusasa laso. USanoka (28) uqale ukudlalela iTeam of Choice ngo-2015 futhi kuyacaca ukuthi uthathe lesi sinqumo ngoba esecabangisise kahle.
“Ngicabanga ukuthi ukushiya iMaritzburg ngemuva kwamasizini amaningi kangaka ngineqembu, akubanga yisinqumo esilula neze. Kodwa ngesinye isikhathi empilweni kumele ubheke amadlelo aluhlaza. Ngibone ukuthi mhlawumbe bese kuyisikhathi sokuthi ngiye endaweni ehlukile, ngiqale kabusha. Bekungesona isinqumo esilula kodwa ekugcineni bekumele ngenze lokho okuvuna mina nekusasa lami,” kusho uSanoka.
IMaritzburg idonsa kanzima kwiDStv Premiership selokhu kuqale isizini. Lokhu sekuholele ekutheni kuxoshwe obeyiqeqesha u-Erick Tinkler. Indawo yakhe ithathwe ngu-Ernst Middendorp obeqeqesha iKaizer Chiefs ngesizini edlule. ITeam of Choice isendaweni yesibili ukusuka emsileni kwi-log.
Nokho uSanoka uthe akukhona lokho okwenze wathatha isinqumo sokujoyina iThe Rockets esiqeqeshwa ngu-Owen Da Gama.
“Ukukhuluma iqiniso ngicabanga ukuthi isitayela abasisebenzisayo sizohambelana nami. Yisitayela engangisithanda vele ngisakhula. Ngiyasithanda kakhulu isitayela sabo ngakho sengikubheke ngabomvu ukudlalela iqembu lami elisha,” kusho uSanoka.
Nokho uvumile ukuthi njengomdlali ufuna ukuzibona esendaweni engcono neqembu asuke elidlalela.
“Vele ufuna ukuzibona ukwiTop 8 futhi ngicabanga ukuthi ngabadlali abaseqenjini, yize abanye besebancane, singenza izinto ezinkulu. Ngifuna ukuwina okuthile neqembu bese ngiqinisekisa ukuthi liyahlala esigabeni esiphezulu,” kusho uSanoka.
IGalaxy isendaweni ka-11 kwi-log futhi ibukeka ibhukulile selokhu kufike umqeqeshi uDa Gama.
Previous Previous post: Ubhashiye nencwadi yothando echiphizisa izinyembezi eKapa uKolisi
Next Next post: Usola izinkinga zangasese ngokuboza kukaBilliat u-Ertugral owayeqeqesha iChiefs phambilini